Thursday September 30, 2021 - 13:41:13
Madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa kaalinta koowaad ka galay hoggaamiyaasha ugu musuq maasuqa iyo xatooyada badan qaaradda Afrika.
Sida ku cad warbixin uu soo saaray Urur caalami ah oo dabagal ku sameeya madaxda ugu musuq maasuqa badan caalamka oo lagu magacaabo Global Corruption Tracker, Farmaajo ayaa kujira kaalinta koowaad waxaana ku xiga Salva Kiir Mayardit oo ah madaxweynaha dowladda Koonfurta Suudaan halka kaalinta sedaxaad uu galay hoggaamiyaha dalka Gini Bisaaw.
Farmaajo ayaa sanadadii lasoo dhaafay lacago malaayiin dollar ah ku bixinayay kala furfuridda maamul goboleedyada mucaaradsan siyaasadda xisbigiisa Nabad iyo Nolol.
Madaxda DF-ka ayaa caan ku ah lunsashada hantida dadweynaha iyagoona lacagaha ay musuq maasuqeen u adeegsaday doorashooyinka madaxtinimada, marwalba oo ay doorasho dhacdo ayaa lacago malaayiin dollar ah lagu laaluushaa ergada iyo xildhibaannada.
Maxay yihiin labada qodob ee ay ka wada hadleen 'Somaliland' iyo madaxweynaha maamulka Jigjiga [Warbixin].